Tapaka tanteraka ny
herinaratra teto Antananarivo, omaly tolakandro. Antony,
tapaka ny tambajotra roa mitondra herinaratra mahery vaika avy any
Andekaleka, mamatsy ny tambajotra iraisan’Antananarivo (RIA). Efa
niverina tamin’ny laoniny tamin’ny ankapobeny ny herinaratra,
minitra vitsy taty aoriana. Nisy kosa anefa ny faritra vitsivitsy
tapaka toy izany koa ny nanomboka ny takarivan’ny alakamisy 12
novambra ary tsy mbola niverina ny asabotsy 14 novambra maraina,
toy ny teny Amboditsiry Marais Masay. Anisan’ny mampitaraina ny
mpanjifa, ny valiteny ao amin’ny laharana 3547, milaza fa “efa
raisin’ny tompon’andraikitra”, na koa hoe “marobe ny mitaraina aty
aminay ka tsy araka”.
Mangataka ny hametrahana
CMR (Centre des métiers ruraux) tohanan’ny tetikasa Formaprod ny
faritra Analamanga. Nambaran’ny filankevi-paritra momba ny
fampiofanana ara-pamokarana any ambanivohitra, Analamanga, fa io
CMR io ny mamaritra miaraka amin’ny tompon’andraikitra eny amin’ny
faritra sy ny tanora, orinasa, rafitra, sy tetikasa misy ny asa
mety azo tanterahina ao amin’ny faritra misy ny tanora. Manampy
amin’ny torolalana samihafa ireo rehetra ireo, satria ny ao amin’ny
distrika iray, ohatra, mahalala tsara ny lalam-piharina
amin’ny Cites ny fanjakana malagasy momba ireo hazo sarobidy tratra
saika naondrana. Manaja ny fanapahan-kevitry ny fanjakana
ny Cites, manaiky izay fepetra noraisina amin’ny fampiasana ireny
hazo ireny. Efa nisy moa nampiasana tamin’ny fanarenana ny Rova.
Voararan’ny lalàna izao ny famoahana hazo sarobidy mbola tsy voadio
(brut). Dinihina eny amin’ny filankevitry ny minisitra ny
fampiasana ireo hazo sarobidy ary haroson’ny minisiteran’ny Tontolo
iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy, hahazo fankatoavana avy
amin’ny Cites. Miato kosa ny fitsarana momba ireo hazo any ivelany,
izay efa nandalo ny ladoany.
Fonja vaky tany Mananara Avaratra : Gadra telo no efa voasambotra, efatra mbola karohina
Taorian’ny fitsoahana voafonja tao Mananara avaratra, ny alahady alina tokony ho tamin’ny 08ora sy sasany alina , dia nikaroka azy ireo avy hatrany ireo mpandraharahan’ ny fonja tany an-toerana raha fantatra fa nisy io fitsoahana io. Voasambotra ny telo nandritra izany fikarohana azy ireo izany, saingy voatery nampiasa ny fitaovana teny aminy ireo mpandraharahan’ ny fonja ka naratra vokatr’ izany izy telo lahy. Ny roa mbola tsaboina ao amin’ny hopitaly Mananara avaratra hatramin’izao noho izy ireo voatifitra tamin’ny faritry ny tendany, fa ny iray kosa efa nivoaka ny hopitaly raha voatifitra teo amin’ny tongony. Mbola karohina kosa ny efatra hatreto, ary efa nilaza ny mpandraharahan’ ny fonja fa efa fantatra ny misy azy ireo, saingy noho fahasarotan’ny lalana no antony. Raha ny fanazavana azo, dia nohararaotin’ireto voafonja nitsoaka ireto ny zava-misy noho faharatsian’ny andro nandritra izao fitsoahan’izy ireo izao ; amin’ny maha-« maison de sureté » ny ao Mananara avaratra, dia somary kelikely ihany ity fonja ity, nefa tsy mitsaha-mitombo ny voafonja raisiny no olana ka misy ireo voafonja koa no manararaotra izany. Nanome baiko ny talen’ny fandraharahana ny fonja Toamasina, fa tsy maintsy atao izay hahazoana ireto voafonja nitsoaka ireto na aiza no misy na aiza, ary tsy maintsy samy manamafy ny fonja any aminy avokoa ny mpandraharaha ny fonja rehetra na « maison de sureté » izany na « maison centrale », fa lasa olana ho an’ny fiarahamonina ireo voafonja mitsoaka, nefa ny andian-jiolahy aza efa mampanahirana mpitandro ny filaminana ny fanaraha-maso sy ny fisamborana azy ankehitriny Malala DidierL’article Fonja vaky tany Mananara Avaratra : Gadra telo no efa voasambotra, efatra mbola karohina a été récupéré chez Midi Madagasikara.
ADY AMIN’NY VALANARETINA – Fivoriana «CTR/Réseau SEGA/COI»
Notanterahina nanomboka omaly ary hifarana rahampitso 12 novambra 2020 ao amin’ny Hotel Colbert Antaninarenina ny fivoriana fanaon’ny « CTR » ao anatin’ny « réseau SEGA /COI ». Fivoriana fanao isan-taona izay andraisan’ireo teknisianina misahana ny fahasalamana eny amin’ny seranana sy ny sisi-tany eto amin’ny Ranomasimbe indiana anjara. Anisan’izany ny avy eto amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny alalan’ny « DVSSER » sy ny « INSPC ». Firenena dimy (05) no mandrafitra ny « réseau Sega », izay ahitana antsika eto Madagasikara, ny Nosy La Réunion, Seychelles, Maorisy ary Kaomôro. Tanjon’izao fivoriana izao ny fifampizarana fahalalana sy traikefa hanamorana ny fiatrehana ny valanaretina. Noresahana manokana nandritra ny andro voalohany omaly ny ady amin’ny valanaretina « Covid-19 » sy ireo paikady nentin’ny firenena tsirairay niatrika izany. Nisongadina ny fahombiazana azontsika malagasy vokatry ny paikady noraisin’ny Fitondram-panjakana na teo amin’ny fanarahamaso izany (Surveillance épidémiologique) na teo amin’ny fandraisana an-tanana ireo tranga (Riposte) araka ny nambaran-dRamatoa Talen’ny DVSSER izay isan’ireo misolotena ny Ministeran’ny Fahasalamana mandritra izao fivoriana izao. Sary sy fanadihadiana: Dir Com/SCM-MSANP L’article ADY AMIN’NY VALANARETINA – Fivoriana «CTR/Réseau SEGA/COI» a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Afham : nanao seho hanoherana ny herisetra
Distrika fahatelo nitondran’ny fikambanam-behivavy manana fahasembanana eto Madagasikara (Afham) ny seho hanoherana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy manana fahasembanana ny tao Ambatolampy, ny alarobia lasa teo tao amin’ny lapan’ny Tanàna. Nampahafantarina tamin’ny alalan’ny dihy, tantara an-tsehatra ny zavatra iainan’ny vehivavy manana fahasembanana ao anatin’ny fianakaviana, fiarahamonina ary amin’ny tontolon’ny asa, araka ny fanazavan’ny filoha nasionalin’ny Afham, Razafinjato Fela. Ireo zavakanto roa karazana ireo no nivoizana ny hafatra fa tsy sakana eo amin’ny fiarahamonina ny fahasembanana ho an’ny vehivavy mitondra izany. Afaka mianatra, miasa, miteraka sy mikarakara tokantrano toy ny vehivavy rehetra na eo aza ny fahasembanana. Mpikambana ao amin’ny Afham ihany no nanoratra ny tantara an-tsehatra « Ohatra anao ihany aho » ary ireo vehivavy mpandrafitra ny fikambanana no milalao miaraka amin’ny mpiantsehatra lehilahy. « Tanjon’ny fampisehoana dihy tao anatin’ny ora iray sy sasany ny fanehoana fa mahita fifaliana amin’ny fiainana sy manaiky ny toe-tena ny vehivavy manana fahasembanana. Ny tantara an-tsehatra kosa fizarana ny zavatra zakain’ny vehivavy sembana amin’ny fiainana andavanandro, indrindra ny fanilikilihana. Tafita kokoa ny hafatra amin’ny fanehoana amin’ny dihy sy ny tantara tahaka izao ka izay no nisafidiananay azy, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanana. Sambany nisy seho tahaka izao nandraisan’ny olona manana fahasembanana anjara mivantana teto Ambatolampy ka nahavariana tokoa, hoy ny mponina nijery ny fampisehoana. Hoentina any Moramanga sy any Miarinarivo ny seho, ny volana jona sy jolay. Tetikasa niarahana amin’ny XOESE izay tahiry ho an’ny vehivavy miaina aty amin’ny firenena mampiasa ny teny frantsay ny seho. Nanomboka ny volana marsa teo ary hifarana amin’ny volana jolay izany fiaraha-miasa izany.Miasa amin’ny faritra 15 ny Afham Efa misy amin’ny faritra 15 eto Madagasikara ny Afham, niforona ny taona 2011. Andraikiny ny fampahafantarana ny zon’ny vehivavy sembana sy manatsara ny fiainan’ireo vehivavy ireo amin’ny lafiny rehetra. Manome fanofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ny vehivavy sembana koa ny fikambanana ahafanany mitady asa. Zava-dehibe ny fanentanana toy izao seho izao.VonjyL’article Afham : nanao seho hanoherana ny herisetra a été récupéré chez Newsmada.
IFM – Quatuor Squad: hiverina ny « Concert de midi »
Fito volana lasa, ny LMM Saxophone Quartet no nanatanteraka ny « Concert classique de midi » tao amin’ny Institut Français de Madagascar, eo Analakely… Fantatra fa hitohy amin’ny alarobia 21 oktobra izao, manomboka amin’ny 1 ora antoandro ity seho an-tsehatra karakarain’ny Madagascar Mozarteum ity. Andiany faha-111 hiakaran’ny Quartet Squad ny sehatra. Tarika ahitana fiarahana tanora manana ny maha izy azy eo amin’ny fitendrena zavamaneno toa an’i Hervais Rabarison (Alto), i Kiady Rakotomalala (Cello), i Ravo Raboanarison (Violon) ary i Andry Robinson (violon).Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana nomanin-dry zareo ny filalaovana ny sanganasan’ireo andrarezin’ny mozika klasika. Anisan’ireny ny « Chrisantemi » an’i G. Puccini, ny « Emperor » sanganasan’i J. Haydn, sns. Ao ihany koa ireo feonkira manana ny lazany noforonina tao anatin’izao vanim-potoana izao. Raha ny nambaran’ny tompon’andraikitra, 150 ny mpijery ho azo raisin’ny efitrano amin’io fotoana io, noho ny hamehana ara-pahasalamana.Anisan’ny zava-dehibe mampiavaka ny mozika klasika ny fananany hery mampivelatra ny saina izany.HaRy Razafindrakoto L’article IFM – Quatuor Squad: hiverina ny « Concert de midi » a été récupéré chez Newsmada.
Misaona ankehitriny ny tontolon'ny politika. Ilay depiote taloha voafidy tao amin'ny distriktan'ny Atsimondrano, Harijaona RANDRIARIMALALA izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Jaona Elite dia nodimandry taorian'ny fijanonan'ny fony omaly alina. Nalaza tokoa io vaovao io tao amin'ny tambanjotran-tserasera omaly alina nanodidina ny 11 ora alina. Araka ny vaovao azo dia torana tampoka i Jaona Elite teo am-pijerevana ny lalao izay nifandonan'ny Barea tamin'ny ekipan'ny RDC. I Harijaona RANDRIARIMALALA dia fantatra tokoa teo amin'ny tontolon'ny fandrarahana tamin'ny fanokafany ireo magazay "Elite GSM". Ireo magazay ireo moa dia mivarotra fitaovana elekronika toy ny finday. I Jaona Elite avy eo dia namorona marika finday tamin'ny taona 2009. Avy eo izy dia nanomboka nivarotra entana vita amin'ny Inox tamin'ny alalan'ny orinasa "Mad Inox". Tamin'ny taona 2013 izy no lany depiote an'ny distrika an'Antsimondra. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana.
Kitra: manohana ireo mpilalao fahiny ny BNI Madagascar
Notanterahina omaly zoma 18 desambra, tetsy amin’ny BNI Analakely ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ity banky ity sy ny fikambanan’ireo mpilalao nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy ny baolina kitra, nanomboka tany amin’ny Club M nandalo ny Scorpions ary mipaka hatraty amin’ny Barea de Madagascar. Fikambanana eo ambany fiahian’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy, izay manamafy ny firaisankina eo amin’ireo niaro ny voninahi-pirenena, tamin’ireo fihaonana iraisam-pirenena maro. Hitondra ny traikefany sy ny fahalalany ireo mpilalao tranainy ireo ary manohana hatrany ny Barea de Madagascar. Ankoatra izay, mi­fanampy amin’ireo mpilalao nanana ny lazany fahiny ny fikambanana, izay tsy mba manana rafitra miahy azy ireo, indrindra eo amin’ny fahasalamana. Noho izany indrindra no nanampian’izy ireo an’i Me Kira sy i Philibert, izay marary ka mitsabo tena, amin’izao fotoana izao. Tohin’ny politika ho fanomezan-danja ny baolina kitra kosa izao, ho an’ny BNI Madagascar, taranja nanome endrika tsara ny Malagasy ary nampiray ny vahoaka. “Mia­vaka ny fanohananay ny baolina kitra sy ny Barea, noho ny zava-bitany, raha tsy hilaza ny Can 2019, izay nampirehareha ny vahoaka malagasy ary nanome ohatra tsara tamin’ny firaisan-tsaina, ny fahaiza-manao”, hoy i Alexandre Mey, tale jeneralin’ny BNI Mada­gascar.Io fijery mitovy io no nampirisika ny BNI Madagascar ka nametraka an’i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea, ho masoivohony. Hampita amin’ireo zandry sy ireo miantoka ny fampandrosoana ny firaisankina sy ny ezaka ary ny fanatsarana ny vokatra ao anatin’ny fanatanterahana ny tetikasa ny tanjona.TorcelinL’article Kitra: manohana ireo mpilalao fahiny ny BNI Madagascar a été récupéré chez Newsmada.
Minisitra Lalatiana Andriantongarivo: « Nahafa-po ny nambaran’ny HCC momba ny lalàn’ny serasera »
« Nahafa-po ny fanapahana noraisin’ny HCC satria mbola nisy adihevitra be teny amin’ny parlemanta iny. Voalazan’ny And 19 ny fandrarana ny famoahana ny vaovao tamin’ny adihevitra tsy azo atrehina. Tamin’ny fakan-kevitra manerana ny faritra, efa nilaza ny mpanao gazety fa tokony hotsoahina izany satria manohitra ny fahafahana mahazo vaovao », hoy ny minisitry ny Kolontsaina sy ny serasera, Lalatiana Andriantongarivo, omaly teny Ankaraobato. Notsiahiviny fa efa niady ny hanalana izany ny minisitera, saingy tsy naharesy lahatra ireo parlemantera. « Notazonina tao ihany io ka isaorana ny HCC nilaza fa tokony hoesorina anaty lalàna izany. Tokony ho azon’ny maro atrehina ny adihevitra, raha tsy hoe tsy azo ialana ny fivoriana mihiboka… Miarahaba tena ny minisitera satria anisan’ny ady natao izany ary nahatsapa ny HCC fa manohitra ny lalàmpanorenana raha atao ao io », hoy ihany ny minisitra. Notsindriny fa tsy nanova ny votoatiny tian’ny minisitera ambara ny HCC. Zon’ny olom-pirenena ny hahazo vaovao ary adidin’ny mpanao gazety manome ny vaovao ka tokony hohajaina ny fahafaha-mahazo ny loharanom-baovao, araka ny nambarany.Synèse R. L’article Minisitra Lalatiana Andriantongarivo: « Nahafa-po ny nambaran’ny HCC momba ny lalàn’ny serasera » a été récupéré chez Newsmada.
Mitohy ny trafika: sokatra 288 tratra tany Toliara
Na maro aza ny efa tratra, tsy mety foana ireo tsy maty voalavo an-kibo mandringana harena voajanahary eto amintsika. Miisa 288 ny sokatra tratran’ny fitantanam-paritry ny Tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy (Dredd) Atsimo Andrefana, omaly. Tao amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy Sanfily no nahatrarana azy ireo, saika hatao entana hampakarina aty Antananarivo. Tsy fantatra kosa ny tompony fa efa manadihady ny mpitandro filaminana sy ny Dredd Atsimo Andrefana.Voalaza fa avy any Mangily ireo sokatra ireo, karazana sokabato (pyxis arachnoids). Misy toerana hanatobiana ny sokatra tratra ao amin’ny SOS Tortues any Mangily-Ifaty. Tsy fantatra na avy ao amin’ity toby ity, na tany amin’ny toeran-kafa, ny nakan’ireo mpanao trafika azy fa mbola mandeha ny fanadihadiana.Njaka A.L’article Mitohy ny trafika: sokatra 288 tratra tany Toliara a été récupéré chez Newsmada.
Une étude réalisée par l’université d’Helsinki, 29 aires protégées sur 123 auraient subi plus de feux en 2020 en comparaison à 2019. La Fondation pour la Biodiversité et les Aires Protégées de Madagascar ou FAPBM renouvelle son engagement dans la conservation de la biodiversité et l’appui aux communautés pour cette année. Un financement de 10 453 858 118 d’ariary, soit 2 735 722 USD a ainsi été octroyé par la FAPBM au bénéfice du système des aires protégées de Madagascar. Un financement qui entend «assurer les charges récurrentes de fonctionnement, les activités de développement local et de conservation de 35 aires protégées» du pays. Mais aussi qui vise à «faire face aux situations d’urgence qui menacent les biodiversités et la conservation (à travers le fonds d’intervention spéciale)». La subvention octroyée par la FAPBM a également pour objectif de «renforcer la capacité de nouvelles aires protégées, de financer un programme de compensation mais également à financer l’extension des aires protégées marines via le projet MPA-GEF 6». Difficiles. L’année 2020 a été particulièrement difficile pour le système des aires protégées de Madagascar. En effet, les restrictions sanitaires durant la pandémie ont eu des impacts néfastes sur le tourisme qui constitue l’une des principales sources de revenus des aires protégées. Outre les impacts financiers, les aires protégées du pays ont également souffert des pressions anthropiques liées à la crise de la Covid-19. Les activités illégales comme le charbonnage et les défrichements sauvages ont augmenté durant l’année 2020. Les fours à charbon illégaux recensés sont passés de 53 à 123 de décembre 2019 au mois de mai 2020 dans l’aire protégée de Bongolava. Soit une hausse de plus de 100 %. Pareille pour Ambanja, 200 hectares de mangroves ont été défrichés au mois de mai de la même année. José Belalahy L’article FAPBM : 10 milliards d’ariary pour 35 aires protégées est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article FAPBM : 10 milliards d’ariary pour 35 aires protégées a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Taolagnaro: natomboka ny « caravane du Sud »
Nanomboka tamin’ny fomba ofisialy ny « Caravane du Sud » tany Taolagnaro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, omaly. Hetsika hizarana ireo kamiao vaventy hitatitra sakafo hanampiana ireo olona mijaly amin’ny kere any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy.Hitondra vary milanja 1.160 taonina sy voamaina milanja 700 taonina ary menaka 28.800 litatra ireo kamiaobe hanao dia mitomandavana ireo, izay hitety tanàna ahitana ireo tena marefo sy tsy ampy sakafo. Nilaza ny filoham-pirenena fa heverina hanampy fianakaviana maherin’ny 300.000 ao amin’ny distrika maromaro tena ianjadian’ny mosary ary ho ampy mandritra ny filàna ao anatin’ny telo volana ireo sakafo hotsinjaraina ireo.Efa misy ampemba milanja 27 taonina sy vary 2.900 taonina vonona any an-toerana, araka ny fiaraha-miasan’ny Pam sy ny ONN.Ankoatra ny fizarana vatsy sy sakafo, hisitraka ny tetikasa “Titre vert” ihany koa ny mponina any atsimo. Mirefy 200 ha ny tany ho azon’ny mponina hovolena. Hahazo 1000m2 vy isam-pianakaviana hahafahana mivelona.Hofanina mandritra ny dimy volana, hanomboka amin’ny volana febroary ireo fianakaviana hamboly amin’izany toerana izany mba hamokatra sy hahaleo tena ara-pivelomana.Tatiana AL’article Taolagnaro: natomboka ny « caravane du Sud » a été récupéré chez Newsmada.